Izimabuli – The Ulwazi Programme
Ngengakuyoyonke imidlalo kunesikhathi sokuthi umuntu adle imabuli yalowo adlala naye. Ukuze ukwazi ukuyidla imabuli yomuntu odlala naye, eyakho uyishaya iye eduze kwale ofuna ukuyidla, uma zime eduze kakhulu ukala ngemimwe emine, kusuka kumunwe wokukhomba kuye kucikicane, uyayihlanganisa uyibeke phakathi kwalezomabuli. Umayenelile iminwe usumdlile lowomuntu kodwa uma kungenelanga awukwazi ukumudla. Ukudlala izimabuli kuhlukene izigatshana ezimbalwa kukhona lapho ekuthi uma ushaye umabuli womunye umuntu kutholakale ukuthi kufanele ubuye uye kodlala kabusha.
Njengakuyo yonke imidlalo nalomdlalo unolimi lwakhona olusetshenziswayo.
Ukumista – usuke ushwebile noma ugejile
Ukutisha – kusho ukuphonsa izimabuli zenu phansi,
Ukukilina – umuntu usuke esusa lokho okungaba yisiphazamiso uma ehlose ukudla imabuli yomunye.
Usafesidephisi – Yilapho kusuke izimabuli zimbili omunye egejile.
Ugcobho noma ukuyiphehla – usuke uyishaye yangakhala
Ukubhemana – yilapho imabuli isondele kakhulu kwenye bese umnikazi wayo ayishaye iqhele.
Lomdlalo ubamnandi uma udlalwa abantu abaningi abalinganiselwa kubantu abayisihlanu kuyaphezulu nawo udlalwa ngezimabuli. Kuwona kudingeka izitini ezimbili zibekwe zisondelane okungaba nesikhala esilinganiselwa eminweni emibili. Kudwetshwa umugqa emagxathini ayishumi lapho kuzoma khona abadlalayo. Inhloso ukuthi bonke abadlalayo baphonse izimabuli zabo zingene esikhaleni esihlukanise izitini. Okwenzile lokhu uthatha imabuli eyodwa kumuntu ngamunye njengomklomelo wakhe. Kubalulekile ukuthi abadlala lomdlalo bangaziphosi izimabuli zabo kude noma zidlule izitini ngoba bayaphuma emdlalweni.
Enye indlela yokudlala izimabuli ukuthi umuntu oyedwa kwabazodlala abale amagxathu alishumi ukusuka emuva uyaphambili adwebe umugqa, bese bemba umgodi onganela izimabuli ezintathu. Bese ebala futhi amagxathu ayishumi adwebe umugqa lapho kuzoma khona abadlalayo. Nalapha kunamagama asetshenziswayo njengokumala – ukuphonsa imabuli yakho wenzele ukuthi ihlale emgqeni noma ingene emgodini. Izimabuli zihlukene ngokulingana kwazo kukhona ezincane, lezi zisetshenziswa uma kumalwa bese kubakhona ezinkulu abazisebenzisela ukushaya ngazo. Uma bonke abadlalayo sebephonsile noma sebemalile bashaya ngokushintshana izimabuli zabo. Uma umuntu eshaye eyomunye uyayidla aze abe neziningi kunabo bonke abadlalayo.